Usoro ArcGIS Pro - Ntọala - Geofumadas
Eprel, 2019 ArcGIS-ESRI, cadastre, AulaGEO, Akụziri CAD / GIS
Mụta ngwa ngwa ArcGIS Pro - bu ihe emere n’aka GIS ndi n’acho achoro imuta ka esi eji ngwanrọ Esri a, ma obu ndi oru nke uzo mbu ndi nwere olile anya imelite ihe omuma ha. ArcGIS Pro bụ ụdị ọhụrụ nke sọftụwia GIS kachasị ewu ewu, na-ejedebe ArcMap 10x.
The N'ezie e mere site Golgi Alvarez, dabere na ya AulaGEO usoro:
Ndị niile na mpaghara ebe ahụ,
Ọrụ ndị ọkachamara mere, kọwaara ya n'olu dara ụda,
Were usoro ahụ gị onwe gị, na ohere maka ndụ,
Nhọrọ iji jụọ ajụjụ mgbe ịchọrọ,
Ihe onwunwe na data dị maka nbudata,
Inweta site na ngwaọrụ mkpanaka,
Na Spanish na Bekee.
Usoro ahụ nwere ngalaba isii; Na nke mbụ, anyị na-arụ ọrụ na data na ọkwa mba, na-amụta usoro otu esi eme usoro na otu data ahụ. Na ngalaba 6 anyị na-arụ ọrụ na ihe atụ nke abụọ, a na-eme ihe omume na akụrụngwa nke nta nke nta, site na ịbubata data site na AutoCAD / Excel ruo na ịme okwu dị mgbagwoju anya na isiokwu dị na tebụl njikọ ndị ọzọ.
Nweta usoro ọmụmụ Spanish
Nweta akwukwo Igbo
N'okpuru ebe a bụ nchịkọta nke ọdịnaya ọdịnaya.
Ngalaba 1. Basics nke ArcGIS Pro
Ka anyi jiri ArcGIS Pro malite. N'ime klaasị a, amaara ọhụụ ọhụrụ nke mmemme a, yana njikwa ọdịnaya dị na ngalaba aka ekpe yana katalọgụ data na ngalaba aka nri. A na-eme ya site na isoro mgbatị na-eji data sitere na ọdụ ụgbọ elu n'ụwa niile, na-enyocha data gbasara ha ma na-anwa ịmara nke ọma na rịbọn na ngwaọrụ.
Nhọrọ data Na klas a ị mụtara ụzọ dị iche iche ịhọrọ ihe, ma site na nhọrọ na keyboard ma dabere na njirimara na tabular na gbasara ohere. Site ugbu a gaa n'ihu, a na-arụ ọrụ niile n'otu ókèala na ọkwa mba.
Ejiri Mpaghara (Bookmarks). N'ebe a, a kọwara ya dị ka iguzobe mpaghara nhọrọ ngwa ngwa, iji nwee ike ịnyagharịa n'ụzọ bara uru. A na-eme mmega a site na iji ọrụ onyonyo satịlaịtị (onyonyo ụwa) ọ na-akụzikwa otu esi emepụta, pịgharịa, mbugharị, dezie ma ọ bụ hichapụ mpaghara mmasị (ibe edokọbara).
Nkebi nke 2. Creatmepụta na idezi data gbasara ohere.
Tinye data si Excel. Nke a gụnyere nzọụkwụ site na ntinye, otu esi etinye data gbasara ohere gbasara tebụl nchịkọta Excel. N'okwu a, a na-eji nhazi obodo; na mmega ahụ ị ga-etinye Excel UTM nhazi mgbe niile. N'ezie, na nke a na omume ndị ọzọ faịlụ gụnyere gụnyere iji nwee ike ịmegharị klaasị ahụ.
Symbology data Klaasị a gụnyere itinye akara ngosipụta dị iche iche dabere na njirisi tebụl. A na-eji mpaghara ndị dị na ọkwa mba maka nke a, nke bụ otu ihe ahụ n'oge mmega ahụ (Madagascar).
Editing attribute data. N'ebe a, a na-ahọrọ akụkụ dị iche iche dịka edezi data alphanumeric, ịmegharị ma gbakwunye agbidi, yana mgbakọ mpaghara na nchekwa na tebụl ndị dabeere na usoro ihe atụ.
Ịdekọ àgwà. Ugbu a, a kọwara otu esi eweta data tabular nke ihe ma mee ka ha pụta dị ka njirimara (aha mmado). A kọwara etu esi eme ya maka polygons, ahịrị na isi; yana akụkụ ndị metụtara nghazi nke labeelu.
Digitization nke ozi ala. A kọwapụtara ngwaọrụ maka edezi data gbasara ohere.
Foto ndị na-ese onyinyo. N'ebe a, na-eji ihe ndị a ma ama na ihe oyiyi, a na-eme georeferencing na-adabere na oyi akwa spatial.
Ngalaba 3. Nyocha data
Mmetụta mmetụta - Aka. A kọwapụtara otu esi họrọ data gbasara data na nke a na-etinye aka na mpaghara mpaghara, họrọ ụdị nhazi, ụdị njedebe.
Ngalaba 4. Bipụta ọdịnaya na ArcGIS Pro
Ọgbọ nke eserese. Nke a bụ otu esi wuo igbe maka ibipụta, na-akọwa otu esi etinye ihe na map dị ka eserese eserese, akara ngosi isiokwu, akara ugwu, wdg. Ọ na-akọwara otu esi ebupụ maapụ ahụ na usoro ndị ọzọ (pdf, png, jpg, eps, wdg) maka ibipụta ma ọ bụ ịlele ya na mmemme ndị a na-ejikarị.
Ngalaba 6. Ka anyị mee ya - kwụpụ site nzọụkwụ
N'akụkụ a, na mpaghara ọrụ nke abụọ dị obere, a na-eme ihe omume ndị metụtara ọrụ a na-ahụkarị n'ihe metụtara arịa. Ha na-echeta ebe ahụ anyị na-agbanye ihe nlereanya dijitalụ site na ihe oyiyi, na-eji Were3D, AutoDesk Recap na igwe ojii ya nke anyị zigara Civil3D. A na-eme mmemme ndị a n'otu mpaghara a site na iji ArcGIS Pro, yana vidiyo nkọwa ndị ọzọ. Maka mmemme niile, data ntinye, faịlụ ndị achọrọ iji mee mmega ahụ na nsonaazụ mmepụta maka ịlele gụnyere.
Mmetụta nke mgbanwe site na ArcMap ka ArcGIS Pro. Klaasị a na-agagharị ArcGIS Pro, interface ya, na-akọwa mgbanwe ndị bụ isi, elele na nsonaazụ nke ụdị a ma e jiri ya tụnyere ArcMap. A kọwara akụkụ nke ọ bụla dị n'elu isi, ebee ka ọrụ ndị bụ isi na ikike ha nwere n'okpuru redesign nke ArcGIS Pro nwere.
E1 jercicio. Njirimara mbubata site na map AutoCAD ka GIS. Were faịlụ dwg site na AutoCAD / Microstation, ma gbalịa ịbubata na ArcGIS Pro; na-akọwa ihe a ga-eme mgbe akwadoghị ụdị a. Akụkụ dịka, nkewa nke ihe site na oyi akwa, iwepụ ihe ndị na-enweghị isi dị ka axis nke n'okporo ámá ahụ nke karịrị akarị, ntughari na klaasị atụmatụ na ntụgharị nke ihe kwesịrị polygons mana nke bịara dị ka akara dị ka ọ dị polygons nke ụlọ ahụ, nchịkọta nke ahịrị kwesịrị ịbụ otu n'ihe banyere isi iyi nke osimiri ahụ, ụlọ na ọdọ mmiri. Karịsịa, olee otu ihe ndị a si bụrụ CAD.
Nwee 2. Ịhapụ saịtị site na isi GPS na usoro UTM. Na ọrụ sitere na AutoCAD, usoro nhazi nke enwetara na GPS ndị dị n'ụdị UTM ka a na-eweta iwepụ ihe onwunwe. Omume a gụnyere ọrụ nke ịbubata nhazi ahaziri iche na ụdị XY, na-ekenye ha amụma WGS84, mpaghara wee gbanwee ha ka ha banye na maapụ na maapụ ahụ. Na ndị a, nhọrọ ịmepụta sub-plot, snap control digitize the dismemberment, gbakọọ perimeta na mpaghara ma na square mita yana ntụgharị na nchekwa na kọlụm ọzọ dị ka hectare na-etinye n'ọrụ.
Nwee 3. Ngwurugwu nke ubi aghara agwakọta. Ihe omumu a bu ihe puru iche. Ọ na-emeso ya, na-aga n'ihu na mmepe ihe onwunwe, akọwapụtara ya otu esi eme njikọ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya, dị ka igodo cadastral dabere na centroid n'ụdị P-coordinateX, coordinateY, dash and then a number.
Nwee 4. Nnyocha ntanye. N'elu osimiri ahụ na-agafe ihe ndị ahụ, a na-agbakọ mpaghara nke mmetụta, na-eji nchekwa nke 15 mita site na axis na isi osimiri na mita 7.5 na nsụgharị. Na mgbakwunye, egosiri otu esi eme mgbasa ahụ iji nwee otu polygon nke mpaghara mmetụta.
Nwee 5. Ịdekọ àgwà. Ugbu a, dị ka ịga n'ihu ọrụ na njirimara ahụ, akọwapụtara otu esi emepụta okwu iji kee data dị iche iche site na kọlụm dị iche iche nke okpokoro n'ụdị akara. N'okwu a, igodo cadastral anyị mebere tupu, yana mpaghara na-agbakwunye A = tupu uru. Na mgbakwunye, ọ na-akọwa otu esi agbanwe akara ahụ, n'ihe banyere aha anyụike osimiri yana otu esi etinye nsonaazụ pụrụ iche ma hazie ụdị ederede ahụ.
Nwee 6. Njirimara site na njirimara. Akụkụ a nke usoro a na-akụzi etu, dabere na data tabular, enwere ike ịkọwapụta ihe ndị a, na-eji njirisi na arụmọrụ nke ArcGIS Pro. A na-ejikọ tebụl Excel ebe ndị nwe ihe ndị ahụ nwere, a na-achọkwa ihe ndị ahụ Ha nwere ọnọdụ pụrụ iche, dịka ọmụmaatụ ebe onye nwe ya nwere aha "Juan", ebe enweghị akara kaadị wee bụrụ isiokwu ya dabere na njirisi.
Nwee 7. Usoro Digitization Klas a lekwasịrị anya n'akụkụ nke ịmepụta na ịdezi data gbasara ohere. Akọwala usoro aghụghọ nke ịkọwapụta dị ka ịme oghere na nkata site na lagoon, otu esi mejupụta ọwa polygon site na iji mmezu akpaaka ma ọ bụ otu esi esere n'akụkụ osimiri site na iji ngwa ọrụ.
Nwee 8. Foto ndị na-ese onyinyo. N'ebe a, inwe onyogho nke ejiri mara UTM mara ya, eme georeferencing. N'adịghị ka mmega ahụ na ngalaba gara aga, a na-eme ya na-adabere na nhazi ndị a na-adọrọ dị ka vertex X, Y. Enwere ike ịnwe nkuzi ArcGIS Pro ndị ọzọ.
Ozugbo ị nwetara akwụkwọ, ị nwere ike ịnweta ya maka ndụ ma were ya n 'oge gị dị ka ị chọrọ.
Previous Post«Previous Na-amalite nzọụkwụ siri ike na 2019 World Geospatial Forum na Amsterdam
Next Post Hapụ Venezuela n'oge blackoutsNext »